Nyhani I soulmate na ebusweni okanye emehlweni, ezifana nolovane yobume ezifanayo?
トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Nyhani I soulmate na ebusweni okanye emehlweni, ezifana nolovane yobume ezifanayo?
Ngaba ubukho ukuncedisana imiphefumlo yabo, lo iqabane umphefumlo womntu, ezifana waziva kwaye kufuneka ube ngaphandle. Okanye uzive ethile nostalgia sihlangana iqabane umphefumlo, ibali yeyela ingqiqo engaqhelekanga okanye bahlala phantsi ngenxa yesizathu esithile yaye kunye kudla weva. Ukuba kukho umntu onjalo, nceda ecaleni uzame ukukhangela iimpawu zomzimba.
ngokuba, ngenxa yokuba kaninzi iqabane umphefumlo into efana iimpawu zomzimba entle. Ukuba kukho kwincopho eqhelekileyo kwi iimpawu kule iveni emzimbeni, oko kukuba umntu kungenzeka ukuba abe liqabane umphefumlo. Ukuba sensuously kuza Abanye abantu bazive kakuhle, kusenokubakho kwincopho eqhelekileyo umzimba zabo Akumangalisi.
kuba iqabane umphefumlo elide nje efanayo, umzekelo, i iqabane umphefumlo kuthiwa zifana iindawo elungileyo, ezifana nezi zilandelayo.
Umzekelo, kukho indawo leyo efana inxalenye, imilo amehlo, impumlo kunye nokuphosa emlonyeni, kwakhona, ezifana nasekuqaleni komqolo, kukho ezininzi ezifanayo kakhulu xa sithelekisa inxalenye kuphela. Ngokuba na ukuba ubuso kuyafana yonke, kunzima ukuqonda xa uqala kuqala, kodwa xa ukhangela inxalenye entle, kusenokuba kukho inxalenye leyo efana ngokumangalisayo nowabo.
? izandla neenyawo shape kuyafana
Oku kwakhona inxalenye encinane umzimba, kodwa kubonakala kukho kwakhona ukuba ziyafana kakhulu ngohlobo izandla neenyawo. imilo iyonke nje kuphela, kodwa ityala kwakhona lwafumanisa ukuba uthanda nje ukuya ngomnwe nokumila lezikhonkwane, ukufunda namasundu. Ukuba kukho xa ungakwazi khangela izandla neenyawo, niyikholise ngeendlela zonke va lwela kuthelekiswa yabo.
? adla kwaye indawo
ibali engaqhelekanga nemivumbo, kodwa ukuba unalo adla okanye birthmark okanye phaya, okanye malunga efanayo simi, okanye indawo macala (twatsa). Oku kwakhona kuthiwa iqabane mphefumlo ngamnye ezinye macala ukuqinisekisa ubukho, uya osandulukwenza imakh ngokucacileyo.
Okunye features D_ ? Hair iyafana, nazo ziquka ukuba umgangatho iinwele kuyafana. Kubonakala Kwakhona, ezifana nombala iinwele kunye lukhuni, kwimeko iinwele olugobileyo you mkhwa efanayo.
kuba lo mntu? Yaye
iqabane umphefumlo Makhe sijonge ukuba uziva, kuba yintoni enye atsaleleka ngokwendalo ukusuka kwixesha sadibana, wena ube ukuze uyazi sele elinye iqela ukuba iqabane umphefumlo ngelo xesha. Ukongeza, ukuba kukho icandelo kuloo ndawo efanayo naleyo okukokwakhe eli xesha eyaqaliswa nje umzimba, babeza bakholwe iqabane umphefumlo unamandla.
, kuya kuba ingongoma ukukhangela ukuba umntu lowo iqabane umphefumlo lula. Ukuba kukho abantu abaye baba ngabantu kunye air-fuel othandana ngoku, ukuba kukho indawo leyo efana yabo, kucetyiswa ukuba uye uthathe unonophelo ekukhuliseni ubudlelwane kuloo mntu.